In this free barashada Excel qaar baad ogaan doontaa tilmaamaha iyo tabaha lagama maarmaanka ah taasi waxay beddeli kartaa noloshaada!
Barnaamijka casharradan bilaashka ah ee 'Excel':
Kumbuyuutar ayaa loo beddelay Qwerty, oo ah qaacido qorta "LC1 (10)" halkii laga dhigi lahaa "A1", nooc aan si sax ah loo qaban, iwm. ; casharkaan Excel kuu ah baran doonaa sida looga gudbo welwelkaas yar maalin kasta haddii aad isticmaaleysid barnaamijka!
Waxaan sidoo kale arki doonaa qaar ka mid ah talooyinka kaa badbaadin kara waqti badan.
Dhamaadka casharkaan, waxaad awoodi doontaa, gaar ahaan, inaad saf u beddelo tiir (iyo dhinaca kale!); waad ogaan doontaa sida loo geliyo safaf badan ama tiirar hal hawl ah, vous baro furayaasha toobiye in badanaaba aan hilmaano taasna faa iido u yeelan karto, iyo waxyaabo kale oo badan ...
Tilmaamaha iyo tabaha muhiimka ah ee 'Excel' Diisambar 28, 2020Tranquillus
READ Sida loo isticmaalo xaashida xaashida ee Excel?
horeExcel Bilaash ah: Si qoto dheer VSearch
socdaBilaash: Sida Loogu Isticmaalo Waxqabadyada Qaabeynta Xaaladda
Wixii Yurub ah ee gelinta: Shirka "siyaasadaha ka mid noqoshada ee ka jawaabaya caqabadaha soo kabashada"